यस्तो पो रहेछ रामकुमारीको फुर्ती बड्नुको राज ! – Media News Khabar
यस्तो पो रहेछ रामकुमारीको फुर्ती बड्नुको राज !
राम्रो होस् या नराम्रो यतिखेर नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीको व्यापक चर्चा भइरहको छ ।
नेकपा एक हुँदा पार्टीमा कुनै विवाद नहुँदा पार्टीले कुनै जिम्मेवारी नदिएको भन्दै सँधै गुनासो रहन्थ्यो झाँक्रीको । काम नभएर घरैमा टिकटक बनाएर बस्ने रामकुमारी झाँँक्रीको व्यस्तता नेकपा हुँदै एमाले विवाद सम्म आइपुग्दा झ्याप्पै बढेको छ ।
नेकपा एमाले विभाजन भएर एकिकृत समाजवादी पार्टी बने पछि उक्त पार्टी अहिले सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बसेको छ । मन्त्री बन्नेमा रामकुमारीको पनि नाम व्यापक रुपमा उठेको छ । मन्त्री मात्रै भए त ठिकै हो रामकुमारी पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीनै बन्ने चर्चा चले पछिको दुनिँया अचम्मित भएको छ ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भिम उपाध्यायले रामकुमारी झाँक्री प्रधानमन्त्री बन्ने ठोकुवा गरेका छन् । जनता टेलिभिजनको अन्तरवार्तामा झाँक्री नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने ठोकुवा गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री बन्ने तर यसमा प्रचण्डको भने साथ चाहिने उनको भनाई छ । समस्या देशको राजनैतीक परिवेशमा भएको बताउँदै प्रचण्डको उदार वानीले झाँक्रीलाई सहयोग गर्ने बताए ।
उनले अन्तरवार्ताको क्रममा नेपाली राजनीतिमा रामकुमारी झाँक्रीको हैसियतको कुनै राजनैतिक नेतृमा नरहेको बताए । उनले भविष्यमा कोहि महिला प्रधानमन्त्री बन्छन् भने यी रामकुमारी झाक्री नै रहेको उनको भनाई छ ।
यो पटक देउवाको सरकारमा उनी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्री बन्ने हल्ला चलेको छ । नेकपा एमालेबाट विद्रोह गर्दा सबैभन्दा शक्तिशाली महिलाको उपमा पाएकी झाँक्रीसहित अरु ४ जना नेकपा एसबाट मन्त्री बन्नेछन् भने १ जना राज्यमन्त्री बन्नेछन् ।
Previous विवादित एमसिसीको पक्षमा बज्न थाल्यो राष्ट्रिय टेलिभिजनबाटै यस्ता विज्ञापनहरू (भिडियोसहित)
Next प्रचण्ड र माधव नेपालले हैरान पारेपछि प्रधानमन्त्री जुटे भयङ्कर ठूलो तयारीमा, अब के गर्लान् प्रचण्ड–माधवहरु ?